नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर कति ? अध्ययन हुँदै – Nepal Japan
नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर कति ? अध्ययन हुँदै
नेपाल जापान २३ फाल्गुन १४:११
विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस हुने गरी विश्वव्यापीरूपमा आतङ्कका रुपमा देखापरेको कोरोना भाइसर ‘कोभिड–१९’ले पार्ने नेपालको समग्र अर्थतन्त्रबारे सरकारले अध्ययन शुरु गरेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापीरूपमै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको अवस्थामा त्यसबाट पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन थालिएको अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना भाइरसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको विषयमा अध्ययन थालिएको र यसमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले काम शुरु गरिसकेको छ ।”
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको नकारात्मक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न थालिसकेको छ । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारप्रसारसमेत तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा कच्चा पदार्थको अभाव देखिने थालेको गुनासो आइरहेको बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले समग्र पक्षको अध्ययन शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरसको तत्काल र दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै त्यसको अध्ययन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिने प्रवद्र्धनका काम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
विश्वव्यापीरूपमा समस्या कस्तो प्रभाव देखिन्छ सोही आधारमा नै थप व्यवस्था एवं निर्णय गर्दै जाने सोचाइमा रहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै कतिपय निर्णयमा अन्तर्राष्टिय कानूनलाई हेरेर पनि निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी विषयमा आफूले बुधबार नै स्पष्ट पारिसकेको दोहो¥याउनुभयो । मन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “मैले बुधबार नै सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइने उल्लेख गरिसकेको छु । प्रचलित कानूनअनुसार नै आवश्यक निर्णय हुन्छ ।” यस्तै अन्तःशुल्कको स्टिकर तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीमा समेत सोही प्रक्रिया अवलम्बन गरिने मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री डा खतिवडाले पछिल्लो दुई वर्षमा शेयरबजार सुधारका लागि दीर्घकालीन महत्वका निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले शेयरबजार तलमाथि हुने प्रक्रियालाई बजारको सेन्टिमेन्टका रूपमा बुझ्न र सोहीअनुसार अगाडि बढ्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूँजी बजारमा सबैभन्दा बढी सुधार यही दुई वर्षमा भएको छ । नीति निर्माण बनाउने कुरामा होस् वा कर प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरामा होस् । यस्तै कारोवारलाई एकदम छिटो समयमा राफसाफ गर्ने कुरामा समेत सुधार गरिएको छ ।” उहाँले मार्जिन लेण्डिङसँग जोडिएका विषय तथा राफसाफको विषयमा समेत सुधार भएको दृष्टान्त पेश गर्नुभयो ।
उहाँले अनलाइन कारोवारसमेत वर्तमान सरकार गठन भएपछि शुरु भएको तथ्य पेश गर्नुभयो । उहाँले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “अर्थमन्त्रीको काम लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने अवसरसम्म पु¥याइदिने हो । बाँकी लगानीकर्ताको जिम्मा हो । शेयरबजारको मूल्यको कुरामा पनि त्यही नै हो । यो कुनै मान्छेको अनुहार र व्यक्ति विशेषसँग जोड्ने विषय होइन ।”
उहाँले आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको वासलात, नाफानोक्सान हिसाब गरेर, भविष्यमा त्यो व्यवसाय कति बलियो भएर जान्छ आदि हेरेर लगानीको निर्णय गर्न पनि लगानीकर्तालाई सुझाव दिनुभयो । मन्त्री डा खतिवडाले लगानीकर्ताले लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरकारबाट आउने नीतिहरु कस्ता हुन्छन् भनेर पर्खिनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।